Ụdị Febuxostat ụra (144060-53-7) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Ụkwụ Febuxostat (144060-53-7)
SKU: 144060-53-7. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Febuxostat powder (144060-53-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Ụkwụ ntụpọ a na - eji agwọ gout. Gout bụ ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo nke uric acid, ihe na-emekarị na ahụ, na-ewulite na nkwonkwo ma na-eme ka mberede ngwa ngwa na-acha uhie uhie, ọzịza, mgbu, na okpomọkụ na otu ma ọ bụ karịa nkwonkwo. Umu ogwu di iche iche bu umu ogwu ndi a na - akpọ ndi na - eme ihe n 'oxantas oxantase.
Ugboro uzuzu uzuzu uzo
Raw Febuxostat ntụ ntụ isi agwa
aha: Ụkwụ ntụpọ
Molekụla Formula: C16H16N2O3S
Ọbara arọ: 316.37
Ụdị Febuxostat ụra na ojiji
Aha aha: Uloric
Aha njirimara: Febuxostat powder (Pronunciation: fe BUX oh stat)
Umu uzo uzo di iche iche
Ụkwụ na-adịghị mma bụ ọgwụ ọgwụ edere iji gbochie ọgụ gout. Gout bụ ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo nke uric acid na-ewulite na nkwonkwo ma na-akpata mberede mberede nke ọbara ọbara, ọzịza, mgbu, na okpomọkụ na otu ma ọ bụ karịa nkwonkwo. Umu uzo di iche iche bu otu ndi ogwu a na - akpọ ndi na - eme ihe na - akpata xanthine oxidase. Ọ na-arụ ọrụ site n'ịbelata ọnụ ọgụgụ nke uric acid dị n'ime ahụ.
Ụkwụ na-ezighi ezi na-abata n'ụdị mbadamba ụrọ. A na-ewere ya otu ugboro kwa ụbọchị, na-enweghị nri.
Ihe mgbakwasị ụkwụ na-agụkarị gụnyere mgbu na nkwonkwo.
Ụkwụ na-adịghị mma nwere ike ime ka dizziness na ọhụụ ọhụụ. Ekwula ma ọ bụ rụọ ọrụ dị arọ ruo mgbe ị maara otú Febuxostat ntụ ntụ si emetụta gị.
Kedu ihe bụ dose nke Febuxostat ntụ ntụ
Ihe Okenye Na-emekarị Maka Ndị Agadi
Mkpụrụ mbụ: 40 mg okwu ọnụ otu ugboro n'ụbọchị
-Ọ bụrụ na ọbara ọbara uric acid dị elu karịrị 6 mg / dL mgbe izu 2 gasịrị, mee ka ọgwụ 80 gụkwuo ọnụ otu ugboro n'ụbọchị
Ndozi usoro: 40 ka 80 mg kwuo otu ugboro n'ụbọchị
-Itu ọgwụ a ga - eme mgbe nnukwu nnukwu ọkụ na - enye aka.
-Anwunye ọkụ nwere ike ime n'ihi ọnụ ọgụgụ urate dị ukwuu site na nkwụnye anụ ahụ, karịsịa n'oge mbido; A na-atụ aro ọgwụ na-adịghị mma nke na-abụghị steroidal ma ọ bụ colchicine ma nwee ike ịba uru ruo ọnwa 6.
- E nwere ike ịchọta mkpụrụ ndụ acid nke ngwa ngwa ozugbo 2 izu mgbe ịmalitere ọgwụ a.
Jiri: Nchịkọta na-adịghị mma nke hyperuricemia symptomatic na ndị ọrịa nwere gout
Ịdị Mfe na Nkwụsịtụ Renal (CrCl 30 ka 89 mL / min) Ọ dịghị mgbanwe a tụrụ aro.
Nkwụsịtụ nke Renal (CrCl 15 ka 29 mL / min): Ngo ụbọchị kachasị elu bụ 40 mg / ụbọchị.
Mgbanwe Nhazi Imeju
Ịdị nwayọọ na-emezigharị Imeju Mmiri (Ufọk nwa-akpa A na B): Ọ dịghị mgbanwe a tụrụ aro.
Nnukwu Ụkwụ Ngwá Agha Na-adịghị ahụkebe (Ngalaba Ngwá Ụmụaka C): Jiri nlezianya mee ihe.
-N'ihi na ndị ọrịa na-etolite ALT ọkwa karịa 3 ugboro nke kachasị elu (3 x ULN): Nkwụsịtụ ọgwụgwọ; adighagharia n'enweghi ihe omuma atu maka ALT abnormalities.
-N'ihi na ndị ọrịa na-azụlite ALT ọkwa karịa 3 x ULN NA bilirubin karịrị 2 x ULN: A ghaghị ịkwụsị ọrịa ma ghara ịmalitegharịa na ndị ọrịa na-enweghị ihe ọzọ etiologies.
- Maka ndị nwere ọrịa ALT ma ọ bụ bilirubin dị ala NA-enwekwu ihe kpatara ya: Jiri nlezianya mee ihe.
- Nlekọta ọgwụgwọ bụ iji belata ma nọgide na-enwe ọrịa uric acid dị n'okpuru 6 mg / dL.
- Ọ bụrụ na onye ọrịa adịghị enweta usoro mmiri ọgwụ uric acid nke na-erughị 6 mg / dL mgbe 2 gaa na 4 n'izu, a ga-enwe mmelite ọgwụ.
-Maximum dose: 80 mg / ụbọchị
A na-eme ka concaient use with mercaptopurine / azathioprine.
Olee otú Febuxostat ntụ ntụ na-arụ ọrụ
Umu uzo di iche iche bu otu ndi ogwu ndi a na-akpọ xanthine oxidase inhibitors. Otu òtù ọgwụ ọjọọ bụ otu ìgwè ọgwụ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. A na-ejikarị ọgwụ ndị a eme ihe banyere ọnọdụ ndị yiri ya.
Mbelata ụbụrụ na-ebelata uric acid site na igbochi xanthine oxidase. Xanthine oxidase bụ enzyme nke na-enyere ahụ gị aka mee uric acid si xanthine. Nnukwu nke uric acid n'ime ọbara gị nwere ike ime ka gout.
Ikwesighi iji ọgwụ a ma ọ bụrụ na Febuxostat ntụ ntụ na-ata gị ụfụ, maọbụ ọ bụrụ na ị na-emeso azathioprine (Azasan, Iranran), mercaptopurine (Purinethol), ortheophylline (Elixophyllin, TheoCap, Theochron, Uniphyl).
Tupu ị na-ewere Febuxostat ntụ ntụ, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa akụrụ, ọrịa imeju, ọrịa obi, cancer, ọrịa Lesch-Nyhan, akụkọ ihe mere eme nke ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa strok, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị natalarị akụkụ ahụ.
Ị nwere ike inwe mmụba na symptoms flaut mgbe mbụ ị na-amalite na-ewere Febuxostat ntụ ntụ. Maka nsonaazụ kachasị mma, nọgide na-ewere ọgwụ ahụ dịka a gwara ya. Dọkịta gị nwere ike ịnye ọgwụ ọzọ gout maka gị iji n'oge mbụ 6 ọnwa ọgwụgwọ na ntụ ntụ Febuxostat.
Iji jide n'aka na ọgwụ a na-enyere ọnọdụ gị aka, ọ ga-adị mkpa ịnwale ọbara gị mgbe mgbe. Gaa na dọkịta gị mgbe niile.
Flucha na-enweghị atụ
Ebube uzuzu ahia
Ụdị Febuxostat enwere mmetụta ọ bụla
Nweta enyemaka ahụike mberede ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla n'ime ihe ịrịba ama ndị a nke mmeghachi omume nfụkasị: hives; ike iku ume; ịba ihu gị, egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ akpịrị.
Kpọọ dọkịta gị n'otu oge ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị egwu dịka:
obi mgbu ma ọ bụ mmetụta dị arọ, ihe mgbu na-agbasa na ogwe aka ma ọ bụ ubu, ọgbụgbọ, ịmị ọkụ, ọrịa obi ike;
mberede ụfụ ma ọ bụ adịghị ike, karịsịa na akụkụ nke ahụ;
isi ọwụwa, nsogbu, nsogbu na ọhụụ, ikwu okwu, ma ọ bụ nkwụsị; ma ọ bụ
nausea, mgbu obi, obere ahụ ọkụ, agụụ na-agụ, urine mmiri, ụrọ ụrọ, jaundice (yellowing nke anụahụ ma ọ bụ anya).
Mmetụta mmetụta dị oke egwu nwere ike ịgụnye:
nkwonkwo ahụ, nkwonkwo, ma ọ bụ nkwesi ike;
obere anụ ọkụ ọkụ; ma ọ bụ
Esi zụta Febuxostat ntụ ntụ si AASraw
Ntụziaka dị na ntụpọ ntụpọ
Epacadostat (INCB024360) ntụ ntụ
Arnica Montana ntụ ntụ
Osimertinib (AZD-9291) ntụ ntụ
Estradiol Valerate ntụ ntụ
Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ
Pramiracetam ntụ ntụ
Lapatinib uzuzu (231277-92-2)
Mibolerone ntụ ntụ (3704-9-4)